Soo dejisan Panda Generic Uninstaller 15.14.5 – Vessoft
WindowsNidaamkaMaaraynta faylkaPanda Generic Uninstaller
Bogga rasmiga ah: Panda Generic Uninstaller
Panda Generic Uninstaller – waa qalab si aad gebi ahaan uga saarto alaabta antivirus Panda iyo barnaamijyada ammaanka ee kombiyuutarkaaga. Software waa caawiye weyn ee kiisaska marka hababka dhaqameedu ku guuldareystaan in ay ka saaraan antivirus. Panda Generic Uninstaller ayaa kuu ogolaaneysa inaad ka saarto antivirus, xitaa haddii aysan ku jirin liiska barnaamijyada la rakibay, ama marka la tirtiro khaladaadka dhacaya, taas oo ka hortagaysa in laga saaro. Software ma u baahan tahay wax aqoon ah oo ka mid ah user iyo dalabyo si ay u riixo furayaasha oo kaliya dhowr ah si antivirus waxaa si buuxda looga saaraa nidaamka oo ay weheliyaan faylalka haraaga iyo furayaasha diiwaanka. Panda Generic Uninstaller waxay ka shaqaysaa labadaba shaybaarka hore ee alaabooyinka iyo alaabta ammaanka ee casriga ah Panda Dome.
Ka saarida badeecadaha ammaanka Panda oo dhan
Si fudud loo furfuri karo
Wuxuu ka shaqeeyaa khadka hore ee antivirus iyo badeecadaha nabadgelyada casriga ah Panda Dome
Soo dejisan Panda Generic Uninstaller
Tani waa ilaalin dhamaystiran oo ka dhan ah xajinta iyo xayeysiisyada, kaas oo siinaya shabakad ammaan ah oo internetka ah iyo qalabyo dheeraad ah oo la xidhiidha asturnaanta.
Antivirus Tani waxay leedahay astaamaha asaasiga ah si aad uga ilaaliso PC-gaaga oo ka dhan ah khayaanada iyo qalabka casriga ah iyo taageeraya farsamooyinka farsamaynta webka si loo ogaado loona xakameeyo shabakadaha khatarta ah.
Nidaamka barnaamijka antivirus ee abaalmarinta ku guulaystay wuxuu bixiyaa dhammaan talaabooyinka amniga ee lagama maarmaanka ah wuxuuna abuuraa jawi la isku halleyn karo oo ka dhan ah fayraska.
Nidaamkan antivirus wuxuu taageertaa teknoolojiyadaha dariiqa si loogu badbaadiyo shabakada internetka iyo ka ilaalinta hanjabaadaha internetka ee digital digital.
Dhiirigaan ballaaran ee buuxa wuxuu hubiyaa difaaca nidaamka noocyada kala duwan ee fayraska, shabakadaha internetka phishing, wuxuu ilaaliyaa shabakada WiFi oo uu ku qoro macluumaadka shakhsiyeed.
Faallo ku saabsan Panda Generic Uninstaller
Panda Generic Uninstaller Xirfadaha la xiriira
IObit Uninstaller – oo ah rakibay barnaamijka aan loo baahnayn, kordhinta lagu rakibay ee biraawsarka, barnaamijyada Windows iyo faylasha harta.
Auslogics BoostSpeed – waa qalab ku habboon in kor loogu qaado, la nadiifiyo oo la saxo khaladaadka ku jira nidaamka hawlgalka. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa sameynta deg deg deg deg ah ciyaaraha iyo barnaamijyada.
Tani waa software kaa caawineysa inaad si dhaqso ah u gashid qoraalka iyo weedho gaar ah iyada oo aan qaladaad ka helno codsiyo kala duwan iyadoo ay ugu wacan tahay liiska horay loo soo saaray ee isku-dhafan ee muhiimka ah.
Tani waa tifaftiraha garaafka ah ee sawir dijitaalka ah oo ay ku jiraan qalab rinjiyeyn leh oo leh habab dabacsan.